बि.सं. २०७६ जेठ २३ गते बिहिबारकाे राशिफल – आफ्नो प्रेरक संसार
बि.सं. २०७६ जेठ २३ गते बिहिबारकाे राशिफल
Bibas chetan — २३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०५:३४0comment
धर्मकर्म तथा सेवामूलक काममा प्रवृत्त भइनेछ। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। जीवनशैली व्यस्त रहे पनि गरी आएको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ। श्रम परे पनि तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। तर आलस्य गर्ने बानीले उपलब्धि गुम्ने सम्भावना देखिन्छ, सजग रहनुहोला।
शरीरमा कमजोरी तथा आलस्य अनुभूति हुनेछ। सानो काममा अलमलिनुपर्दा विशेष अवसर गुम्न सक्छ। चिताएको काम रोकिनेछ भने अरूका लागि बुद्धि र समय खर्चनुपर्नेछ। स्वास्थ्यका लागि निश्चित समय आराम गर्नुपर्ला। बेसुरको निर्णयले समस्यामा पार्न सक्छ। आफ्ना विषयमा अनायासै अरूले दाबी गर्न सक्छन्, गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् भने सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। थोरै लाभ भए पनि ठूलो आवश्यकता पूरा हुनेछ। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। ईर्ष्या गर्नेहरूले भने समस्यामा पार्न सक्छन्। पहिलेका योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला।
अस्वस्थताले कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। हतारका काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। पढाइलेखाइमा सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकिएला। व्यापार-व्यवसायमा समेत सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ। नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ला। निराश नहुनुहोस्, मौका पर्खंदा स्थितिमा सुधार आउन सक्छ। आँटले काम लिँदा बिस्तारै फाइदा हुनेछ।
बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। ईर्ष्या गर्नेहरूले सताउन सक्छन्। मान्यजनसँग असमझदारी बढ्नेछ भने हठ गर्ने बानीले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ। आसलाग्दो काम बिग्रनाले मन खिन्न हुनेछ। बेलैमा सजग नबन्दा व्यवहारमा दुःख पाइनेछ। अरूको सुझावमा भर नपर्नुहोला। महत्वाकांक्षी योजना पनि तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला।
मिहिनेत परे पनि गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ। केही सहयोगीहरू टाढिन सक्छन्। तापनि प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउन सकिनेछ। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा फाइदा हुनेछ। कृषिमा कामको चाप बढ्न सक्छ। चौपायामा केही समस्या देखिए पनि अर्थ उपार्जन हुनेछ।
खर्च लागे पनि तत्काल उद्देश्य पूरा नहुन सक्छ। आँटेको काममा अवरोध आउला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने समय छ। आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिएला । प्रतिस्पर्धामा पनि केही कमजोर साबित भइएला। आफन्तबाट टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। काममा स्थानान्तरण अथवा टाढाको यात्रा हुने सम्भावना छ। घर-गृहस्थीलाई समय दिन नसकिएला।
काम सम्पादन भए पनि तत्काल आम्दानीको आशा नराख्नुहोला। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ। आज पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ होला। ऋण मोचन हुन सक्छ। व्यापार बढ्नेछ भने दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ। गरिएका कामको राम्रै मूल्यांकन हुनेछ। तर, तत्काल फाइदा उठाउँदा सञ्चित लाभांश घट्न सक्छ। bishwaghatana.com